Published June 19, 2020 at 11:07 PM CDT
Caafimaadka Degmada Siouxland ayaa soo weriyey 6 xaaladood oo dheeri ah oo laga soo qaaday 134 tijaabooyin ah, iskucelcelis 3,052 ah oo ka tirsan Gobolka Woodbury iyo 42 dhimasho ah.
Caafimaadka Dakota County Public Health ayaa soo sheegay 5 kiis oo cusub, wadarta 1,751 iyo 33 dhimasho ah.
Nebraska waxay soo tebineysaa lix dhimasho oo cusub oo coronavirus ah, taasoo guud ahaan gobolka ka dhigeysa 240 tan iyo markii uu cudurku biloowday.
Saraakiisha gobolka ayaa hadda xaqiijiyay in kabadan 17,400 (17,415) xaaladood oo wanaagsan.
Nebraska waxay lahayd heerka ugu hooseeya ee shaqo la'aanta ee dalka Mareykanka bishii 5aad 5%. Heerka qaranku wuxuu ka badan yahay 13%. Heerka shaqo la'aanta Iowa wuxuu ahaa 10%, wuxuu hoos uga dhacay Abriil laakiin weli wuu sarreeyaa. Hal sano ka hor, waxay ahayd 2.7%.
Iow dadka Iowansku sii wadaan lashaqeynta saameynta coronavirus, gobolka wuxuu sameyneyaa la-talin deg-deg ah oo bilaash ah oo laga heli karo Deeqda Soo-kabashada COVID. La-taliyayaashu waxay ka caawin karaan Iowans dhisida xirfadaha la-qabsashada.
Adeegyada luqadda Isbaanishka waa la heli karaa, lataliyayaasha sidoo kale waxay dadka u gudbin karaan adeegyo kale. All Iowans waxay ka raadsan karaan la talin qarsoodi ah oo bilaash ah Covid Recovery iowa dot-org.
Kristi Dakota Gov. Kristi Noem wuxuu maanta iclaamiyay in uu yahay Maalinta Juneteenth Day ee gobolka si loogu xuso taariikhda xuska dhaqanka ee xorriyadda Afrikaanka la addoonsaday.
Bayaanka ma xambaarsan yahay culeyska maalinta ka dhigeysa maalin fasax dowladeed sida ay ka tahay gobollada kale badankood.
Afayeen u hadlay gudoomiyaha, ayaa sheegay in ficil sharci oo kaliya uu sameyn karo taas.
Dimuqraadiyiintu waxay qorsheynayaan inay soo jeediyaan sharci dersiga soo socda si loogu daro Juneteeth liiska ciidaha dowladdu aqoonsan tahay.
Local NewsLocalIowaWoodbury CountyNebraskaSouth DakotanewsDakota CountyJuneteenthunemploymentSouth Dakota Governor Kristi NoemCOVID-19Somali